Naamusa kadhaa Rabbii Naamusa kadhaa Rabbii - articles
Rabbiin s.w. akkana jedhe.''sa inniin rakkataadhaaf awwaatu yeroo inni kadhate,kan rakkina furmaata godhu kan bakka buoota dachii isin godhe akka gabbaramtoota dharaa nitahee? (Abadan hintaane jechuu).Allaahaan wajji gooftaan biro nijiraa?garuu isin Waa xiqqoodha gorfamtan.
Bureydaan r.a.akkana jedhe.. nabiin s.a.w. namticha tokko kan akkana jedhee Rabbi kadhatu dhagayan \_Allaahumma inni as'aluka annii ashhadu annaka natallaahu laa ilaaha illaa anta,al ahadussamadu,allazii lam yalid walam yuulad,walm yakun lahuu kufuwan ahad\_ nabiin ni jedhan dhugaa rabbiin kadhatte maqaa isaa guddaan, ka yoo isaan kadhatame namaa kennu,kan yoo isaan yaammatame namaa awwaatu. Abuudawud galmeesse. "
2-yeroo qeebqltii filachuu.
Yeroon kadhaan Rabbii qeebalamtu saa'aa dhumaa guyyaa jim'aa irraa,yeroo bariisaa, yeroo sujuuda keysaa,yeroo azaanaafii iqaamaa jedduu.
3-harka lameen olqabuu.
nabiin s.a.w. akkana jedhan''Rabbiin keessan oltahee kabajamee jiraataa arjaadha,yoggaa gabrichi isaa harka lameen isa jala ol qabatee isa kadhate qullaa gadi deebisuu niqaanfata''abuu dawud odesse.
4-kadhaa yoggu 3 irra deddeebiuu.
Nabiin s.a.w. akki jedhan ''Tokkoo keysaniif kadhaan niawwaatama waan hin jarjarsiifatiniin,kadhadhee homaa naaf hin awwaatamne waan hin jedhiniin'' bukaariitu galmeesse.
Abdellaa ibnu mas'uud akki jedhe,nabiin s.a.w. yoggu kadhatan yoggu 3 irra deddeebian ,yogguu gaafatanis yoggu3 irra deddeebian.''
5-lubbuu ufii,qabeenyaa fii ilmaan abaaruu dhabuu.
Nabiin s.a.w. akki jedhan lubbuu teessan uf hin abaarinaa,joollee teessan hin abaarinaa,qabeenya keessan hin abaarinaa,yeroo rabbirraa kadhaan kennamtu mudattanii isinitti qebalamuutu sodaatamaa.''
6-obbolessa fagoo jiruu du'aaii godhuu.
Nabiin keenya s.a.w. akki jedhan
''kadhaan rabbi tan muslitichi obboleessa isaa kan fagoo jiruu godhu qeebalamtuudha.mataisaa birratti malaaykaan tokko ramadameeti,yeroo inni obboleessa isaatiif toltuu kadhate hunda malaaykichi sun Rabbi haa qeebalu siifis fakkaata kana haa kennu , jedhaan.''
7-Rizqii halaala qofqrrqtti gabaabbachuu,bololuu.
Abbaa hureyraa r.a. irraa odeeffamee nabiin s.a.w. akkana jedhan jedhe, namticha karaa dheeraa deeme tokkorraa dubbatee dhukkaawaa faaggawaa kantahe harka isaa kara samii oldiriirsee –yaarabbi yaarabbi (jedhee kadhataa) eeysaa kadhaan isaa isarraa qeebalamti! Nyaanni isaa haraamii, dhugaatiin isaa haraamii, uffanni isaa haraamii''
GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN